တပ်ဦးကို ဘယ်သူချွန်းဖွင့်မလဲ | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
တပ်ဦးကို ဘယ်သူချွန်းဖွင့်မလဲ	Posted by mm thinker on July 19, 2008
Posted in: Poem.	Tagged: Poem.	နေသာလေသာညနေရဲ့ တိမ်တွေရဲ့ ကကြိုးလောက်ဘယ်အရာကများ ပိုလှပါသလဲ။
မယ်ကမ္ဘာကို ဂျပန်မယ်က ရသွားတာကျွန်တော်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။
Kenneg ရဲ့ Solo Ablum တွေကကျွန်တော်ရဲ့အပန်းဖြေရာဆိုရင်လည်းခင်ဗျားနဲ့ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး…Yani ရဲ့ တေးသွားတွေကိုဘယ်သူက Scale မကိုက်ဘူးလိုပြောရဲလဲ။
ဒွေးသေတာစောတယ်လို့ ပြောတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူသေတာ နောက်ကျလဲ…?ထူးအိမ်သင်၊ ဒိုးလုံး၊ တာရာမင်းဝေ……..……………………………..အခြားများစွာ။
သေချာစွာ နောက်ကျနေတာကတော့ကျွန်တော်ကို အဖြေပြန်မပေးသေးတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်။
အဲ့ဒီကောင်မလေးရဲ့ အပြုံးလောက်မိုနာလီဇာရဲ့အပြုံးက မခမ်းနားဘူး။
ဘယ်သူပြောလဲတစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် “လေးဖြူ“ရဲ့ Stage Show ကိုမကြည့်ရတော့ဘူးလို့။
ထားလိုက်ပါတော့အနှစ်မပါတာတွေပဲ မင်းမူနေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။ပျင်းတယ်၊ ငြီးငွေ့တယ်၊ ဆာလောင်တယ်၊ ထုံထိုင်းတယ်၊အားမလိုအားမရဖြစ်တယ်။
မနေ့ကလိုပဲ အသက်ဆက်ခဲ့။ကျွန်တော်လည်း မတတ်နိုင်ဘူး၊ ခင်ဗျားလည်း မတတ်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်လည်း တတ်နိုင်တယ်၊ခင်ဗျားလည်း တတ်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်လည်း ဘာမှမလုပ်ဘူး၊ ခင်ဗျားလည်း ဘာမှမလုပ်ဘူး။လွမ်းစရာ အတိတ်လည်း မရှိဘူး။မျှော်လင့်စရာ အနာဂတ်လည်း မရှိဘူး။ပစ္စုပန်မှာ ငွေနောက်လိုက်၊ အဆင်ပြေမှုနောက်လိုက�
��၊အနေချောင်ဖို့နောက်လိုက်၊ အထင်ကြီးမှုနောင်လိုက်၊အတ္တနောက်လိုက်၊ အာရုံငါးပါးနောက်လိုက်ဘယ်သူက တပ်ဦးကိုတပ်ဦးကိုချွန်းဖွင့်ရဲလဲ။
← အာဇာနည်နေ့ မမေ့နိုင်ပါ	မြန်မာဝီကီပီဒီယားအရေး →	Pages	about